FOOTBALL LEAKS: Wax Badan Ka Ogoy Faah Faahinta Heshiisyada Mohamed Salah, Romelu Lukaku Iyo Alvaro Morata Ee Kooxaha Liverpool, Man United Iyo Chelsea. – GOOL24.NET
FOOTBALL LEAKS: Wax Badan Ka Ogoy Faah Faahinta Heshiisyada Mohamed Salah, Romelu Lukaku Iyo Alvaro Morata Ee Kooxaha Liverpool, Man United Iyo Chelsea.
Sir fashiliyaha Football Leaks ayaa aduunka kubbada cagta kaga yaabsaday xog badan oo ay ka soo saareen heshiisyada ciyaartoy muhiim ah oo ka ciyaarta horyaalka Premier league iyada oo la soo bandhigay xog ay adag tahay in faah faahinteeda si sahlan lagu helo.
Waxaanu qaybihii hore idiinku soo gudbinay xogta faah faahinta heshiisyada Aubameyang, Alexis Sanchez, Virgil Van Dijk iyo waliba Mkhitaryan laakiin waxaa sirtan qayb ka ah Romelu Lukaku, Mohamed Salah iyo Alvaro Morata.
Barnaamijka loo bixiyay ” Uncovering The Dirty Deals Behind The Beautiful Game” oo ah shaacinta heshiisyada wasakhaysan ee ka danbeeya ciyaarta quruxda badan” oo ay iska kaashadeen Football Leaks iyo wargayska Der Spiegel ayaa lagu soo bandhigay faah faahino badan oo la xidhiidha qandaraasyo ay ku jiraan xidigo magac wayn ku leh kubbada cagta England.
Warbixintan waxaa diyaariyay wariyaasha Rafael Buschmann iyo Michael Wulzinger oo ka hawl gala wargayska Der Spiegel ee dalka Germany kuwaas oo xidhiidh toos ah la leh Football leaks waxaana warbixinta lagu daabacay Guardian Faber iyada oo lagu iibsanayay £12.99 halkii mar ee la dajistaba laakiin haddii uu qof doonayo in uu hadda iibsado waxa uu sirtan oo dhamaystiran siisan karaa £9.94 gini wuxuuna dalabkani ku eeg yaahy May 19,2018 iyada oo laga heli karo www.mailshop.co.uk/books.
Haddii aan intaas ku dhaafno halka laga heli karo xogtan oo dhamaystiran iyo waliba cida soo saartay aan hoos ugu degno faah faahinta heshiisyada Romelu Lukaku, Alvaro Morata iyo Mohamed Salah ee banaanka la soo dhigay.
Faah Faahinta Heshiiska Romelu Lukaku Ee Man United:
Sida xogta Football Leaks ee heshiiska Lukaku lagu shaaciyay waxay Man United kula soo wareegtay 75 milyan gini oo ay kooxda Everton kaga soo qaadatay laakiin mushaarka sanadkii ee Lukaku oo ayna ku jirin gunooyinku ayaa lagu sheegay 7.8 milyan gini.
Haddii uu Romelu Lukaku ka baxo Man United ama uu heshiiskiisa 2022 uu kordhiyo waxay Everton heli doontaa 5 milyan gini laakiin kooxda Everton ayaa haddaba isku hubsatay 10 milyan gini oo ay waajib ku noqotay in Man United ay bixiso maadaama oo heshiiska Lukaku uu ku jiray in Everton ay 10 milyan oo gini helayso haddii uu min 23 gool dhaliyo afarta xili ciyaareed ee ugu horaysa waayihiisa Man United.
Lukaku ayaa haddaba soo dhaliyay 26 gool waxayna Everton helaysaa 10 milyan ginigii ugu horeeyay iyada oo saddexda xili ciyaareed ee soo socda min 10 milyan ka heli doonta haddii Lukaku uu Man United u dhaliyo 23 gool ama wax ka badan.
Lukaku ayaa Man United ka heli doona 4.5 milyan gini xili ciyaareed kasta oo uu ku lug lahaado 50 gool oo ah gool dhalin iyo gool caawin isaga oo xili ciyaareedkan ilaa hadda ku lug lahaa 35 gool iyo gool caawineed. Waxa kale oo heshiiska Lukaku ku jirta 2.4 milyan gini oo ah daacadnimadiisa Red Devils halka uu xayasiisyada ku heli doono 1.96 milyan gini.
Faah Faahinta Heshiiska Alvaro Morata Ee Chelsea:
Chelsea ayaa Alvaro Morata kula soo wareegtay 57.2 milyan gini sida lagu shaaciyay xogta Football Leaks waxayan Blues lacagtan saddex waqti kala siin doontaa kooxdii ay Morata kala soo wareegtay ee Real Madrid.
Chelsea ayaa wakiilka Alvaro Morata siisay 5.3 milyan gini taas oo ku biiraysa lacagta ay Blues xidiga ree Spain kula soo wareegtay ee 57.2 milyan ka gini ah. Morata ayaa sanadkii mushaar ahaan u qaata 9.9 milyn gini marka aan gunooyinka lagu darin waana 191,000 kun gini usbuuciiba.
Heshiiska Morata ee Chelsea waxaa lagu daray in xidiga ree Spain uu heli doono 830,000 kun oo gini haddii uu ku soo bilawdo kala badh kulamada tartamada oo dhan ee Blues waxanaa la filayaa in lacagtan uu ku heli doono kulankii arbacadii ee uu Blues ugu soo bilawday.
Ugu danbayn Morata ayaa jeebka ku shuban kara 880,000 kun oo gini haddii uu xili ciyaareedkii dhaliyo 25 gool wuxuuna ilaa hadda dhaliyay 15 gool taas oo muujinaysa in xili ciyaareedkan uu seegi doono lacagtan.
Faah Faahinta Heshiiska Mohamed Salah Ee Liverpool:
Liverpool ayaa heshiiskii Mohamed Salah ee ay Roma kagala soo wareegtay aan qodobo badan ku darin iyada oo ay lama filaan kugu noqon doonto mushaarka uu xidiga ree Masar ku soo gaadhay Anfield oo uu bandhig layaableh ka sameeyay.
Mushaarka Mohamed Salah ee todobaadkii ayaa ah £123,000 kun oo gini oo kaliya waana lacag aad uga hoosaysa lacagta uu Morata usbuucii Blues ka qaato oo 191,000 kun oo gini ah waxa kale oo heshiiska Mohamed Salah lagu daray in 2.5 milyan gini uu heli doono haddii uu xili ciyaareedkii dhaliyo 35 gool.
Mohamed Salah ayaa bishii February ee sanadkan gaadhay 35 ka gool isaga oo hadda sare u dhaafay 40 gool oo tartamada oo dhan ah wuxuuna haddaba helay 2.5 milyan gini oo uu xili ciyaareed kasta ku heli karo haddii uu gaadho 35 gool.